Tsy mahazo na inona na inona maimaimpoana ianao! , Fiangonan'Andriamanitra an'Andriamanitra Suisse (WKG)
Ilay teolojia tranainy farany atao hoe Thomas Torrence, dia nanisy fanamarihana toy izao: "Jesosy Kristy dia maty ho anao marina tokoa satria manota ianao ary tsy mendrika azy ary nahatonga anao ho anao mihitsy aza, na dia taloha sy tsy nino ny finoanao azy aza. efa namatotra anao akaiky anao amin'ny alalany, fa tsy hamela anao na oviana na oviana izy.Na dia mandà azy aza ianao ka mandefa ny tenanao ho any amin'ny helo, dia tsy hitsahatra ny fitiavany ". (The Mediation of Christ, Colorado Springs, CO: Helmers & Howard, 1992, pejy 94).
Tena marina tokoa izany! Izany angamba no mahatonga ny ankamaroan'ny kristiana tsy tena mino an'io. Izany angamba no mahatonga ny ankamaroan'ny Kristiana mihevitra fa ny famonjena dia tsy avy amin'ny olona mahazo izany amin'ny alalan'ny finoana sy ny fiainana ara-pitondran-tena ihany.
Na izany aza, ny Baiboly milaza fa efa nomen'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra - fahasoavana, fahamarinana ary famonjena - amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy. Tsy afaka manao na inona na inona momba izany isika. Izany fanoloran-tena tanteraka ho antsika izany, io fitiavana tsy hay fehezina io, io fahasoavana tsy misy fepetra io, tsy afaka manantena ny hahazoantsika izany rehetra izany isika amin'ny fiainany arivo.
Ao amin'ny 1 Kôr. 1,30 dia Jesosy Kristy no fahamarinana, fanamasinana ary fanavotana antsika. Tsy afaka manome azy ny rariny isika. Fa kosa, matoky azy ho zavatra ho antsika rehetra tsy misy hery isika. Satria izy efa tia antsika voalohany, dia afaka tamin'ny fontsika feno fitiavan-tena hitia azy sy ny tsirairay isika.
Tian'Andriamanitra talohan'ny nahaterahanao. Tiany ianao na dia mpanota aza. Tsy hitsahatra ny hitia anao na dia tsy mahavita manaraka ny fitondrany marina sy mahafinaritra aza izy isan'andro. Izany no vaovao tsara - ny fahamarinan'ny filazantsara.
Tsy mahazo na inona na inona eo amin'ny fiainana ianao!